About us - Dezhou Dongyu Plastic Impahla Co., Ltd.
Ngeminyaka engaphezu kwengu-20 yobuchwepheshe beplastiki obuningi, sinolwazi nesipiliyoni esenza sibe umphakeli wesikhwama sepulasitiki ohola phambili embonini. Silwela ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu yesikhwama esiningi kanye nemikhiqizo yesikhwama sepulasitiki ayigcini nje ngokuhlangabezana nezidingo zakho kepha yeqa okulindelwe. I-Dezhou Dongyu Plastic & Packaging Co, Ltd. igxile ekukhiqizeni zonke izinhlobo zezikhwama zokupakisha zepulasitiki. Ngemishini esezingeni eliphakeme kanye neqembu labasebenzi abaqeqeshiwe nabezobuchwepheshe, kuyibhizinisi lesimanje elihlanganisa imboni kanye nezohwebo. Le nkampani manje inendawo yokusebenzela ejwayelekile nendawo yokugcina izinto enendawo engamamitha-skwele angama-2 000 nabasebenzi abangama-50-100. Kunemishini yokushaya amafilimu epulasitiki engama-20, imishini engaphezu kwe-30 eqhubekayo yokudonsa, ukufaka imishini nokusika kanye nemishini yokunyathelisa eyi-10. Umthamo wokukhiqiza wonyaka ufinyelela kumathani ayi-4000. Sisebenza ngokukhethekile ukukhiqiza ukucaciswa okuhlukahlukene kwezikhwama zevesti, izikhwama eziyisicaba, izikhwama zevesti ezigoqiwe, izikhwama ezigoqiwe, izikhwama zokubamba, izikhwama zesinkwa, amasaka wesaphulelo esingu-20%, izikhwama zikadoti wesilwane, izindwangu zetafula ezilahlwayo, izikhwama ze-ziplock, imiqulu yefilimu, njll. Izimakethe ezinkulu ngoba imikhiqizo yiNyakatho Melika, iNingizimu Melika, iYurophu ne-Afrika.
Isiqubulo / umbono / insizakalo yokuthengisa ngemuva
Isiqubulo senkampani yethu sithi: "Ubuqotho buyisisekelo, ikhwalithi kuqala". Inkampani yethu isungule uhlelo lokulandelela ikhwalithi yomkhiqizo womsebenzi ozwakalayo. Izisebenzi ezikhethekile zizohlola ikhwalithi yomkhiqizo. Yonke imikhiqizo esezingeni eliphansi ithathwa njengemfucumfucu. Uma ngabe kukhona noma yimiphi imikhiqizo esezingeni eliphansi etholakala ngemuva kokuthi umthengi ezitholile izimpahla. Sinohlelo lwangemva kokuthengisa. ukuxoxisana nokuxazulula. Njalo lapho uthola izimpahla zingakapheli izinsuku ezingama-30, sizokwenza impindelo. Lokhu kuzokwenza ushintsho olungcono ku-oda lakho elilandelayo.
Umbono wenkampani yethu ukusebenzela wonke amakhasimende kahle futhi uzuze ukuqashelwa kwamakhasimende ngekhwalithi nobuqotho. Kusuka kumakhasimende kuya kubangani abangcono.
Mayelana nesevisi yokuthengisa ngemuva. Ngemuva kokukhipha ubufakazi obunokwethenjelwa. Sizodingida isinxephezelo ngokushesha okukhulu. Akulimazi izintshisekelo zakho. Futhi ukurekhoda nokuxoxa. Ukuvikela izinkinga eziphindaphindwayo zekhwalithi yomkhiqizo.
Sengathi ungasinika ithuba.
Sizosebenzisa izinyathelo ezingokoqobo ukukutshela ukuthi sinelungelo lokukhetha.